Iingcebiso ngepayipi, izinto ezisetyenziswayo ze-PCR, Iibhotile zeReagent-ACE
Fumana iisampulu zasimahlaYIYA
♦ I-Suzhou ACE Biomedical Technology Co, Ltd.yinkampani yobuchwephesha ezinikele ekunikezeleni ngexabiso eliphezulu ezilahlwayo zonyango kunye neelebhu zeplastiki ezisetyenziswa ezibhedlele, kwiiklinikhi, kwiilebhu zokuqonda isifo kunye neelebhu zophando lwesayensi.
Have Sinamava abanzi kuphando nakuphuhliso lweplastics zesayensi yobomi kwaye sivelisa ezona zinto zintsha zokusebenziseka kwendalo nezisebenzisekayo. Zonke iimveliso zethu ziveliswa kwiklasi yethu eyi-100,000 yamagumbi acocekileyo. Ukuqinisekisa olona mgangatho uphezulu uhlangabezana okanye udlula imigangatho yeshishini, sisebenzisa kuphela eyona mveliso ikwimigangatho ephezulu yokwenza izinto zethu…
Hamilton STAR CO-RE ingcebiso
Ingcebiso yeTecan LiHa RSP
350ul 96 Round kakuhle ipleyiti V ezantsi
350ul 96 Round kakuhle ipleyiti U ezantsi
Ukusukela ekusekweni kwayo, i-ACE izibophelele ekwenzeni nasekuboneleleni abathengi kunye nezinto ezisetyenziswayo eziphezulu kwezonyango nakwilabhoratri.
2. Nika ikowuteshini yokhuphiswano
Zonke iimveliso zethu ziyilelwe ziinjineli ezinamava.
Abathengi bethu kumazwe angaphezu kwama-20.
OEM INKONZO NOKUZENZAKALISA
MOLD / ISIXHOBO
Amacwecwe anzulu emithombo
I-ACE Biomedical ibonelela ngoluhlu olubanzi lweemicroplathi ezinzulu ezingenazintsholongwane kwizicelo ezinobuthathaka zebhayoloji kunye neziyobisi. Ii-microplates ezinzulu ezinzulu ziludidi olubalulekileyo lweplastikhi esebenzayo esetyenziselwa ukulungiswa kwesampulu, ukugcinwa kwekhompawundi, ukuxubana, ukuthuthwa kunye nokuqokelelwa kwamaqhezu. Bona ...
Umbhobho oCociweyo ...
Kwilabhoratri, izigqibo ezinzima zenziwa rhoqo ukumisela eyona ndlela yokwenza uvavanyo olunzima kunye novavanyo. Ixesha elingaphezulu, iingcebiso zepipette ziye zahlengahlengiswa ukuze zilungele iilebhu kwihlabathi liphela kwaye zibonelele ngezixhobo ukuze amagcisa kunye nososayensi babenakho ukwenza uphando olubalulekileyo. Oku kubaluleke kakhulu ...
Ngaba iThermomet yendlebe ...
Ezi thermometer zeendlebe ze-infrared ezidume kakhulu koogqirha babantwana kunye nabazali zikhawuleza kwaye kulula ukuzisebenzisa, kodwa zichanekile? Uphengululo lophando lubonisa ukuba abanakubakho, kwaye ngelixa iiyantlukwano zeqondo lobushushu zincinci, zinokwenza umahluko kwindlela aphathwa ngayo umntwana. Uphando ...